Xoghoose.com Iyo Warar Xaqiiqo Ah » MARCA: Maamulka Real Madrid oo aan ku degdegi doonin go’aanka mustaqbalka Gareth Bale, maxaase isbedelay?Xoghoose.com Iyo Warar Xaqiiqo Ah
MARCA: Maamulka Real Madrid oo aan ku degdegi doonin go’aanka mustaqbalka Gareth Bale, maxaase isbedelay?
Gareth Bale ayaa dhaawac kale oo dib u dhac ah uu soo gaaray, wuxuuna haatan ku dhibtoonayaa inuu si buuxda taam u noqdo – inkastoo ay xaaladdiisu xun tahay hadana agaasimeyaasha kooxda Real Madrid ayaan go’aan degdeg ah ka gaari doonin mustaqbalka xiddiga reer Wales.
Dad badan oo ku sugan bannaanka Estadio Santiago Bernabeu ayaa soo jeedinaya in waqtigii Bale ee Real Madrid uu soo dhammaaday ka dib dhaawicii ugu dambeeyey ee soo gaaray.
Laakiin markii ay majaladda Marca xiriir la sameysay xafiisyada fullinta Estadio Santiago Bernabeu waxaa loo sheegay in aysan weli wax go’aan ah ka qaadan mustaqbalka Bale, isla markaana uusan degdeg ku jirin.
Waa dhab oo dhaawac cusub ayaa soo gaaray Bale, taasna maamulka Real Madrid ma ahan wax ay soo dhoweeyeen, iyadoo weliba la is lahaa Bale waa midka Los Blancos ka samata bixin doona xaaladda xun ee ay ku jirto. Laakiin kooxdu waxay aaminsan tahay inuu Bale u baahan yahay in la ilaaliyo, oo aan baylah la dhigin.
Xiddigii hore ee Tottenham ayaa ku jira xaaladdii ugu xumeyd tan iyo markii uu yimid dalka Spain, kooxda ayaana ballan qaaday in aysan garabkiisa ka bixi doonin, Bale ayaana taageero ka heysta madaxweyne Florentino Perez iyo tababare Zinedine Zidane.
Majaladda Marca ayaana sheegeysa in go’aan walba oo ku saabsan mustaqbalka Bale ee Real Madrid la gaari doono xagaaga soo aadan, bedelkii waqtigaan ay kooxdu go’aan carol eh ka qaadan laheyd mustaqbalka 28 sanno jirkaan.
Horyaalka England Premier League ayaa laga yaabaa inuu Bale ku laabto – halkaasoo ay ka doonayaan kooxaha Manchester United, Chelsea iyo Tottenham oo uu hore ugu soo ciyaaray.